Hemp Seeds နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသင့်သိထိုက်သောအရာ ထိပ်တန်းအာဟာရဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ခု အော်ဂဲနစ်လျှော်
Hemp မျိုးစေ့များ ၎င်းသည်စက်ရုံအခြေပြုပရိုတိန်းများ၊ မရှိမဖြစ်ဖက်တီးအက်စစ်များနှင့်ဖိုင်ဘာပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သူတို့သည်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အစာခြေခြင်း၊ ကြွက်သားထုထည်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ သွေးအားနည်းရောဂါကိုကုသပေးခြင်း၊ ဒါကြောင့်ငါတို့နောက်ထပ်မတူးခင်အရင်ဆုံးအနီးကပ်ကြည့်ပြီးနားလည်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ရအောင်။
ဘာတွေလဲ Hemp မျိုးစေ့များ?
Hempလူကြိုက်များသောစက်မှုဆိုင်ရာလျှော်ကြေးနန်းသည် Cannabis Savita Plant ၏မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲဖြစ်သည်။ သူတို့က၎င်း၏ bast များအတွက်စိုက်ပျိုးကြသည် ဖိုင်ဘာ သို့မဟုတ်၎င်း၏စားသုံးနိုင်သောအစေ့များဤတွင် bast fiber သည်သစ်ပင်တစ်ပင်၏အတွင်းပိုင်းအခေါက်ဖြစ်သောအပင်မှအမွေးရှိသောပစ္စည်းကိုဆိုလိုသည်။ ကလာသောအခါ Hempလူတွေကသူတို့ရဲ့အလှူငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးပြီးအရင်းအမြစ်အဖြစ်လုပ်ဆောင်တဲ့ဆေးခြောက်စက်ရုံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြတယ် ဆေးခြောက် နှင့် Hashish။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကုန်ပစ္စည်းသုံးမျိုးလုံးသည် - Hemp, ဆေးခြောက် နှင့် Hashish tetrahydrocannabinol (THC) ဖွဲ့စည်းမှုပါရှိသည်။
၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောဆေးခြောက်ပမာဏ Hemp Marijuana နှင့် Hashish ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသောပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက THC ပမာဏအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သူတို့တစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး ဘယ်လိုကွဲပြားတယ်ဆိုတာပိုကောင်းအောင်နားလည်ဖို့ဆိုရင်ငါတို့ကြည့်ရလိမ့်မယ် -
Hemp မြေဆီလွှာအခြေအနေကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ရေတွင်ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်ပေါင်းသတ်ဆေးများမပါဘဲအလွယ်တကူစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများကို ၁၀ - ၁၅ ပေအမြင့်အထိမရောက်မှီရက်ပေါင်း ၁၂၀ (၄ လ) ရိတ်သိမ်းသည်။
Hemp အစေ့များတွင်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 30% ဘိုဟိုက်ဒရိတ်၊ 25% ပရိုတိန်း၊ ၎င်းသည်အိုမီဂါ -၃ နှင့်အိုမီဂါ -6 fatty acids တို့၏အကောင်းဆုံးမျှတမှုရှိမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီအက်စစ်၏အကောင်းဆုံးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုလူသိများသည်။
၏ဖွဲ့စည်းမှုအပြောင်းအလဲ လျှော် မျိုးစေ့ကိုအချက်များစွာအဖြစ်ခွဲထားသည်။ အချို့ကိုအောက်ပါဇယားပုံစံဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
၁.၁ လျှော်စေ့ကိုအနီးစပ်ဆုံးဆန်းစစ်ခြင်း -
SL.NO PARAMETERS မာတိကာ (%)
၁ အစိုဓာတ် ၃.၀၇
၂ ရေနံ ၃၂.၂၁
၃ ပရိုတိန်း ၂၃.၉
၄ Ash ၄.၃၂
၅ ဖိုင်ဘာ ၁၇.၃
၆ Carbohydrate ၂၈.၅
SL.NO PARAMETERS တန်ဖိုး
၁ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ အရည်
၂ အရောင် အဝါရောင်ရဲရင့်
၃ အနံ့ သာယာသော nutty
၄ အရသာ Bland
၅ အမှတ်တံဆိပ် 15-72 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
၆ တုံ့ပြန်မှုအညွှန်းကိန်း (၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ၁.၄၆
၇ တိကျသောဆွဲငင်အား (20 ° C) 0.89
၏ 1.3 ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ Hemp Seed Oil:
၁ အက်စစ်တန်ဖိုး (ဆီမီဂရမ် KOH / g) ၂.၁၅
၂ အိုင်အိုဒင်းတန်ဖိုး (g / 100 g ဆီ) ၁၆၃.၅
၃ saponification နံပါတ် (mg mg KOH / g ဆီ) 190.2
၄ အတည်မပြုနိုင်သောအရာများ (ဆီ ၁TP1) ၀.၂၆
၅ ပါအောက်ဆိုဒ်နံပါတ် (Meg / Kg) ၇.၂
ဒါကြောင့်အထက်ပါအချက်အလက်များမှသင်မည်သို့ကြည့်နိုင်သည်ကို Hemp မျိုးစေ့များ အခြားဆေးခြောက်မိသားစုဝင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရအချက်များရင်းမြစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါ။
၏အရေးပါမှုကို Hemp မျိုးစေ့များ ဆေးဝါးများအနေဖြင့်
သမိုင်းကြောင်းအရ, ဆေးခြောက်စက်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းများကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည် Hemp, ဆေးခြောက်နှင့် Hashish အရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပမာဏအတွက် THC အစိတ်အပိုင်းများဆံ့ဘူး။ THC သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အန္တရာယ်ရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုဖန်တီးပေးနိုင်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်၌တည်၏ Hemp မျိုးစေ့များ၊ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက THC ပမာဏနည်းသည် ဆေးခြောက် နှင့် Hashish ဘာကြောင့်လဲ Hemp အစေ့များကိုကျန်းမာသောအစားအစာအဖြစ်ကုသသည်။ Hemp အစေ့များသည် Omega-3 နှင့် Omega-6 fatty acids များကြွယ်ဝပြီး၎င်းအချိုးသည်နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့် autoimmune ချို့တဲ့မှုကိုဆန့်ကျင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်မှုဖြစ်သည်။
ဤတောက်ပသောအစိမ်းရောင်အရောင် Hemp အစေ့ အကြောင်းကို 90% polyunsaturated ဖက်တီးအက်ဆစ်ပါရှိသည်။ ဤအရာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်လာသည် Hemp အစေ့ fatty acid ကိုအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်လို့သတ်မှတ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
အာဟာရအကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ခု Hemp မျိုးစေ့များ?:
အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပြောနေတာ, Hemp အစေ့များကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်တိုင်းရင်းဆေးအမျိုးမျိုးနှင့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးများတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်ကုသနိုင်သည်။ ရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုကြည့်ကြပါစို့ Hemp မျိုးစေ့များကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် -
၁ ။ ပရိုတင်းပါဝင်မှုများ
အကြောင်းပြချက် Hemp အစေ့များကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင် (ပရိုတိန်း၏ကောင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော) ပဲပုပ်များကဲ့သို့ပရိုတိန်းများများပါဝင်သည်။ i,e။ မျိုးစေ့ 30 ဂရမ်သို့မဟုတ်3ဇွန်း၌တည်၏ Hemp အစေ့တွင်ပရိုတိန်းပါဝင်မှုရှိနိုင်သည် ၉.၄၆ ဂရမ်။
၎င်းတို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၉ လုံးပါ ၀ င်သည့်ပရိုတင်းဓာတ်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ပရိုတိန်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၉ လုံးကိုမဖွဲ့စည်းနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ယင်းသည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည် Hemp ပရိုတိန်းပါဝင်မှုကိုအလုံအလောက်ရရန်အတွက်အစေ့များသည်အစားအစာမှတစ်ဆင့်စုပ်ယူသည်။ အဆိုပါ arginine အတွက်ပစ္စုပ္ပန် Hemp အစေ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များရှိနေခြင်းကြောင့်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေသည်။
၂ ။ နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေ
Hemp အစေ့သည်နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိကိုလက်စထရောသို့မဟုတ်ဖက်တီးအက်စစ်ပမာဏမျှတမှုအပါအ ၀ င်ကုသမှုအမျိုးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Hemp အစေ့များ၌ Omega-3 နှင့် Omega-6 fatty acids များပါဝင်သောအချိုးအစားသည် ၃း၁ ဖြစ်သည်။
သုတေသနအကြံပြုချက်အရ Hemp မျိုးစေ့များသည်ပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်ညီမှုရှိသည့်၎င်း၏မျိုးဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆီဓာတ်ပြည့်ဝမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်
၃ ။ Boost အစာကြေစနစ်:
အင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်တစ်ခုအရအစီရင်ခံစာကဆိုသည် Hemp ပျော်ဝင်ခြင်းသာမကပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသောအစားအသောက်အမျှင်များ၏အံ့ဖွယ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပျော်ဝင်နိုင်သောအမျှင်များ၏အဓိကအခန်းကဏ္stမှာအစာခြေလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်ထိုင်ခုံများကိုစုဆောင်းပြီးအစာခြေလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်းဖြင့်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်းလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပျော်ဝင်သောအမျှင်ဂလူးကို့စစုပ်ယူမှုနှင့်အစာခြေနှင့်အစာအိမ်ဖျော်ရည်၏ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးအကြောင်းမဲ့နေကြသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဤအမျှင်အမျိုးအစားများပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင့်အားပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးပြissuesနာများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီနိုင်သည်။
၄ ။ အိပ်မပျော်မှုကိုသက်သာစေရန်ကူညီပေးသည် -
သောအရေးအပါဆုံးနှင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ roles တစ်ခုမှာ Hemp အမျိုးအနွယ် မဂ္ဂနီစီယမ်ပါ ၀ င်မှုနှင့်အတူမြင့်မားသောဓာတ်သတ္တုပါဝင်မှုရှိခြင်းဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးစိတ်သက်သာမှုနှင့်စိတ်သက်သာမှုကိုခံစားရစေသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ထည့်သွင်းပြီး ဦး နှောက်ကိုဖြတ်သွားသောအခါ Serotonin သည်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်ဟုလေ့လာမှုတစ်ခုကမကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့ပြီးလေ့လာမှုတစ်ခုအရ Melatonin (အားလန်းဆန်းစေပြီးစိတ်သက်သာမှုကိုပေးသောအားကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအထောက်အကူ) ဖြစ်သည်။ ဒါကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ် Hemp အစေ့ အိပ်မပျော်လူနာများအတွက်အကြံပြုထားပါသည်။
၅ ။ Hemp Oil သည်အရေပြားရောဂါကိုသက်သာစေသည်။
လေ့လာမှုများအရသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ Omega-3 နှင့် Omega-6 fatty acids တို့သည်သင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အားရေရှည်တွင်သင့်တော်စွာနေနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ Hemp ရေနံ နှင့် Hemp မျိုးစေ့များ polyunsaturated နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖက်တီးအက်စစ်များ၏အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ရရှိသော Omega-3 နှင့် Omega-6 အချိုး Hemp အစေ့များသည်အချိုးအစား ၃း၁ တွင်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။
လျှောက်ထားခြင်း Hemp ရေနံ သင်၏အသားအရေသည်အရေပြားနှင့်ဆိုင်သောပြissuesနာများကိုကာကွယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါရောဂါများကို အခြေခံ၍ Hemp ရေနံသည်ဖြည့်စွက်ချက်အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှုများကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသောပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်း။ cathartic အရေပြားကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
၆ ။ သွေးအားနည်းရောဂါကုသ
သင်သံထဲမှာသံကိုတွေ့နိုင်တယ် Hemp လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သွေးနီဥများဖွဲ့စည်းခြင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောအဓိကဓာတ်သတ္တုပါဝင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူထားသောမျိုးစေ့များ။
ဒီမှာစုပ်ယူသည်အဘယ်မှာရှိ Hemp သင့်ခန္ဓာကိုယ်၌သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သံဓာတ်ပါ ၀ င်သောပမာဏများပါဝင်သောအစေ့များသည်အစွမ်းအစဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။
၇ ။ ကြွက်သားထုထည်နှင့်ကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုတိုးမြှင့်သည်။
သင်သည်ကာယပညာရှင်တစ်ယောက်လောသို့မဟုတ်ကြွက်သားမျှင်အချို့ကိုရရှိရန်ကြိုးစားနေသူတစ် ဦး လား။ Hemp အမျိုးအနွယ် ပရိုတိန်းအမှုန့် ကြွက်သားထုထည်ရဖို့လိုတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ မင်းကြားတာပေါ့၊ Hemp အစေ့များ၌သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိပရိုတိန်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်မှတ်ယူထားသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၉ လုံးနှင့်ပါဝင်သည် ပရိုတိန်း ကြွက်သားကြီးထွားမှုနှင့်ပြုပြင်မှုအတွက်လိုအပ်သောသော့ချက်ဖြစ်သည်။
၈။ သွေးကြောရောဂါသက်သာပြီး -
သုတေသီများနှင့်အခြားအင်ဂျင်နီယာဝင်ပေါက်များစွာကယင်းကိုပြောဆိုကြသည် Hemp Arthritis ဝေဒနာခံစားနေရသူတစ် ဦး ကိုကုသရာတွင်ရေနံသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အမေရိကန်များ၏ 15% နီးပါးဒီနာတာရှည်နာကျင်မှုခံစားနေကြရသည်။
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း (RA): ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်သည့်အဆစ်များကိုတိုက်ခိုက်လေ့ရှိသည်။ ဤအဆစ်အမြစ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်လူတစ် ဦး ၏လက်နှင့်ခြေထောက်များကိုအကျိုးသက်ရောက်ပြီးနာကျင်ခြင်း၊ တောင့်တင်းခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Osteoarthritis (OA) - ၎င်းသည်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အရိုးများကိုနာကျင်ခြင်းနှင့်တောင့်တင်းခြင်းများကိုသက်ရောက်စေသည်။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိတင်ပါးဆုံရိုး၊ ဒူးနှင့်လက်အဆစ်များကိုထိခိုက်နိုင်သောအဖြစ်များသည့်ပြissuesနာများဖြစ်သည်။
Hemp ရေနံသည်နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုစီမံခြင်းဖြင့်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်လေ့ရှိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်သုံးပြီးယုံကြည်သည် Hemp နာတာရှည်နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရေနံအရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်သည်။
၉ ။ ဆံပင်၊ အရေပြားနှင့်လက်သည်းများကိုကုသနိုင်သည်။
Hemp မျိုးစေ့များမှကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်သည် Hemp အရေပြားအခြေအနေ၊ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း၊ နှင်းခူနာ၊ psoriasis၊ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းစသောအရေပြားအခြေအနေများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်အလှကုန်နှင့်အသားအရေထိန်းသိမ်းသည့်ထုတ်ကုန်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောရေနံ။
ဒီမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ရှိပါတယ် Hemp အစေ့များကတိုးတက်ရန်ကြိုးစားသည်
သွေးတိုးရောဂါ: Hemp oil တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၉ ခုရှိနေခြင်းသည် Hydroslylate ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းဓာတ်သွင်းခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းသည်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကုထုံးကိုလျော့ချခြင်း လျှော်ပဲနံပင်ကိုဆေးခြောက်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဆေးခြောက်ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုတားဆီးရန်အကာအရံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဟော်မုန်းများကိုထိန်းညှိပေးသည်။ မျိုးစေ့များ၌သိုင်းရွိုက်နှင့်ပန်ကရိယကိုခံစားနေရသောသူများအတွက်ဟော်မုန်းထိန်းညှိပေးသော gamma-linoleic acid ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ဟော်မုန်းမညီမျှမှုကိုလည်းထိန်းညှိပေးသည်။
၁၀ ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချသည်
စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်အပြောင်းအလဲများသည်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပြaffectedနာဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ Hemp အမျိုးအနွယ်ကိုဆီ chiropractic လူနာများအတွက်အဖိုးတန် Anti- ဆေးထိုးနိုင်ပြီးနှင့်စိတ်ဝေဒနာကိုပျောက်ကင်းစေလေ့ရှိပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ပရိုတင်းဓာတ်ပြည့်ဝစွာစားနေလျှင်၎င်းသည်၎င်းရောဂါကိုကျော်လွှားရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည် လျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုဆီ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကိုသက်သာစေရန်လိုအပ်သောအရေးကြီးသောဓာတ်သတ္တုများနှင့်ပရိုတိန်းများပါ ၀ င်သည်။
၎င်းတို့သည်သင့်အား၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ နက်ရှိုင်းသောအသိပညာပေးရန်သင့်အားအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရေးကြီးဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်အချို့ဖြစ်သည်။
အခုငါတို့အကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတချို့ကိုပြောတာထက်ကောင်းကျိုးတွေအကြောင်းမပြောနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင်ဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတချို့ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ Hemp မျိုးစေ့များ သင့်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ် -
Hemp မျိုးစေ့များနှင့်ဆက်စပ်သောအနည်းငယ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်၊ အကယ်၍ သင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ကိုခံစားနေရပါကဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအချက်များမှာ antikoagulants များနှင့်အတူသောက်ပါကသွေးထွက်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
သင်သတိထားသင့်သည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု - အကယ်၍ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေလျှင်သို့မဟုတ်ကလေးငယ်တစ် ဦး ကိုသယ်ဆောင်လျှင်၎င်းသည်ဤအဆင့်တွင်သင့်လျော်သောဆေးဝါးဖြင့်လမ်းညွှန်ပေးမည့်သင်၏ဆရာဝန်ထံမှအကြံဥာဏ်ယူရန်အကြံပြုပါက။
ယခုငါတို့ Hemp အမျိုးအနွယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့နိုင်သမျှသောဖြစ်နိုင်သမျှရလဒ်နှင့်အတူပြီးပြီကျနော်တို့နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောအဆင့်နီးစပ်သူ နိဂုံးချုပ်, ရှာကြစို့:
အဘယ်ကြောင့် Hemp မျိုးစေ့ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားသင့်သနည်း
သင်, ထိုအချက်ကိုသတိပြုမိကြသည်အဖြစ် Hemp မျိုးစေ့များ Omega-3 နှင့် 3: 1 အချိုးအစားရှိ Omega-6 fatty acid ပါဝင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၉ ခုလုံးနှင့်ပါ ၀ င်သည့်ပရိုတင်းဓာတ်များသည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်။
ဤ Hemp မျိုးစေ့များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အာဟာရအများဆုံးအပင်ဖြစ်ပြီးသက်သတ်လွတ်စားသူများနှင့်အစားအသောက်ကုန်ကြမ်းများအတွက်အရေးပါသောပရိုတင်းဖြစ်သည်။ Hemp မျိုးစေ့များကိုအစားအစာထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြည့်စွက်အရာများစွာတွင်လည်းအသုံးပြုသည် Hemp နို့, ပရိုတိန်းအမှုန့်, ထောပတ်, သစ်ရွက်ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြား။
အစားအစာထုတ်ကုန်များသာမကဘဲအသုံးပြုသည် Hemp ရေနံ အသားအရေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြfromနာများကိုအနည်းငယ်သာဖော်ပြပါ။
သူတို့ကမင်းကိုတားဆီးပေးတယ် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နှင့်သင်၏အဆစ်နှင့်ဆက်စပ်အများအပြားသည်အခြားနာကျင်မှု။
ဤရွေ့ကား Hemp အပင်များ အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အရင်းမြစ်အရှိဆုံးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့မည့်အပင်များဖြစ်သည်။
၎င်း၏အများအပြားနှင့်အတူ အကျိုးကျေးဇူးများ, Hemp မျိုးစေ့များ အာဟာရအထောက်အပံ့ဖြင့်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအားဖြည့်ပေးနေသည်။
ဤ entry ကို Uncategorized @da, CBD news တွင်တင်ခဲ့သည်။ အမှတ်အသား ပြုထားသည် ။